तपाईंको यौनिकता सुधार गर्नुहोस्: खुशी हुनु पर्ने कुञ्जीहरू | स्वयं सहायता संसाधन
Keys कुञ्जीहरू तपाईंको कामुकता सुधार गर्न र सुखी हुन
सुसाना Godoy | 28/04/2021 13:12 | सम्बन्ध
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको यौनिकतालाई सुधार्नुको मतलब आनन्दित हुनु हो? यसको कारण तिनीहरू हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका छन्। यो रमाइलो गर्ने समय हो, आफैंलाई जान दिनुहोस् र त्यस्तै, हामी शरीर र दिमाग दुबैलाई समेट्छौं। यसैले जब दुबै जडित छन्, केहि गलत हुन सक्दैन!
अब तपाईंलाई थाहा छ त्यो सेक्स तपाईंको जीवनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, यस पक्षलाई सुधार गर्नका लागि कुञ्जीहरूको श्रृंखला जान्नु आवश्यक छ। निस्सन्देह, हामी सबै खुशी हुन चाहन्छौं, कि हामीले हाम्रो आँखामा त्यो चम्किरहेको देख्यौं र प्रत्येक दिन एउटा नयाँ चुनौती हो जसको लागि हामीले सबै ऊर्जा थपेका छौं। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ?
1 तपाईंको कामुकता सुधार गर्न पूर्वाग्रहहरूको बारेमा बिर्सनुहोस्
2 आफैंलाई राम्ररी यौनबारे जान्नुहोस्
3 कामुकता विषयहरु को बारे मा खोज्नुहोस् कि तपाईलाई चासो
4 नियमितमा फस्नबाट जोगिनुहोस्
5 खुशीको सहयोगीहरुमा झुकाव
तपाईंको कामुकता सुधार गर्न पूर्वाग्रहहरूको बारेमा बिर्सनुहोस्
हामी असंख्य मिथ्याहरू होचो हुनबाट बच्न सक्दैनौं, जुन हाम्रो जीवनमा चल्दछ। तर यो त्यस्तो चीज हो जुन हामीले चिठीमा कहिल्यै पछ्याउनु हुँदैन। यौन क्षेत्रमा मात्र होइन तर हाम्रो दिन प्रति दिनको अन्य पक्षहरूमा पनि। खुशी हुन, हामीले केहि बिचारहरूलाई त्याग्नुपर्दछ जसले हामीलाई खुशी हुनबाट रोक्छ, हाम्रो बारेमा हाम्रो वरिपरि रहेका पूर्वाग्रहहरू सहित, हाम्रा साझेदारहरू वा सामान्यतया कामुकता।
सबै बिर्सनु भनेको आनन्द लिने पहिलो चरणहरू मध्ये एक हो तपाइँ वास्तवमै के चाहानुहुन्छ वा चाहिएकोमा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईं यो चरण लिनुहुन्छ मात्र, तपाईं आफ्नो कामुकता सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्र्याचबाट सुरू गरेदेखि, तपाईलाई नयाँ अनुभवमा पुर्‍याउन तपाईलाई गाह्रो हुँदैन, उनीहरूले जेसुकै कुरा गरे पनि यदि तपाइँ तिनीहरूलाई छनौट गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने।
आफैंलाई राम्ररी यौनबारे जान्नुहोस्
यो सधैं भनिन्छ कि अरूलाई आफूलाई उत्तम दिनको लागि हामीले आफूलाई राम्ररी चिन्नु आवश्यक छ। यद्यपि यो स्पष्ट लाग्न सक्छ, यो यौन क्षेत्र मा सधैं यस्तो हुँदैन। किनकि हामी पूर्ण रूपमा मात्र रमाउनेछौं यदि हामीलाई वास्तवमै हामी के मनपर्दछौं भनेर जान्छौं। त्यसो भए, यो सल्लाह दिइन्छ कि आफैंले अनुभव गर्न पाउनु भनेको पहिलो बुँदा हो उपचार गर्न। तपाईंले आफ्नो शरीरलाई गहिराइमा जान्नुपर्दछ, कुन चीजले तपाईंलाई थरथर काँपेको छ वा के तपाईंलाई कुनै प्रतिकृया छैन। यसैले यहाँ एक कदम अगाडि बढ्न र काल्पनिक वा सम्भावित यौन क्षेत्र मा अपेक्षा पूरा गर्न आउनेछ। यस तरीकाले तपाईं जहिले पनि दुई गुणा बढीमा रमाइलो गर्नुहुन्छ, कि त एक्लो वा एक जोडीको रूपमा।
कामुकता विषयहरु को बारे मा खोज्नुहोस् कि तपाईलाई चासो
क्षितिज थोरै खोल्दा सधैं राम्रो हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई धन्यवाद, हामी केहि थोरै बिभिन्न विषयहरू जान्न सक्षम हुनेछौं र यदि यसमा हामी वास्तवमै रुचि राख्छौं भने। त्यसो भए, तपाईको यौनिकतालाई सुधार्नका लागि खातामा लिनुको अर्को विचार नयाँ अभ्यासहरूबाट प्रेरित हुनु हो, नयाँ चीजहरू प्रयास गर्नुहोस् र हरेक चरणमा सिकिरहनुहोस्। तसर्थ, यो टेबल मा छन् कि कामुकता को बारे मा सबै मुद्दाहरु को राम्रो संग आफूलाई सूचित गर्न दुख छैन। अवश्य पनि, तिनीहरू थोरै छैनन्, त्यसैले, तपाईंले जहिले पनि एउटा छनौट गर्नुपर्नेछ जसले तपाईंलाई उत्तम महसुस गराउँछ। तपाईं रमाईलो कथाहरू पनि भेट्टाउन सक्नुहुन्छ जुन अन्य व्यक्तिहरूबाट आउँदछ।
नियमितमा फस्नबाट जोगिनुहोस्
दिनचर्याले कुनै पनि स्पार्कलाई निभाउँदछ जुन यसको नुनको लायक हुन्छ। त्यसैले हामी यसबाट सधैं भाग्नुपर्दछ। कसरी? राम्रो त्यहाँ बिभिन्न विकल्पहरू छन् जुन हामीले विचार गर्नुपर्दछ, जस्तै स्थानहरू वा स्थानहरू फरक पार्ने र आफैलाई ती कल्पनाहरूद्वारा टाढा राख्ने त्यो भन्दा पहिले हामीले उल्लेख गर्यौं तर त्यो सधैं यस विषयमा ठूलो भूमिका हुन्छ। चाहे एक्लो होस् वा एक जोडी, परिवर्तनहरू सँधै राम्रोको लागि हुन्छन् किनभने तिनीहरूमा तपाई त्यस्तो चिंगारी पाउनुहुनेछ जुन कहिलेकाँही हामीसँग अभाव हुन्छ। यदि हामी सँधै त्यस्तो जारी रहन्छौं, हामी केवल एकलताका साथ आफूलाई फेला पार्नेछौं र मुस्कान छिट्टै हाम्रो अनुहारबाट हराउनेछ।
खुशीको सहयोगीहरुमा झुकाव
त्यहाँ धेरै छन्, र धेरै फरक, कामुक खेलौना र सामान जुन तपाईंको नयाँ अनुभवहरूको आनन्द लिनको लागि। सबै स्वादका लागि विचार, एक्लै वा एक जोडीको रूपमा रमाईलो गर्न। ती सबैको साथ, तपाईं अनौंठो पलहरू पनि बाँच्नुहुनेछ जसले तपाईंको जीवनमा सबै भन्दा रमाइलो सनसनीहरू बनाउँदछ। यसको लागी, हामी कामुक सौंदर्य प्रसाधन को सबैभन्दा परम्परागत भाइब्रेटर उल्लेख गर्न सक्छौं। यस्तो दुनिया छ कि तपाईंलाई यो अलि बढी थाहा छ भनेर राम्रोसँग योग्य छ। तपाईंको लागि, तपाईंको स्वास्थ्य र सामान्य तपाईंको जीवनको लागि।
यो सत्य हो कि यी सेक्सनहरू वा तपाईंको यौनिकतालाई सुधार गर्ने सल्लाहहरूको साथसाथै, अझै तपाईंलाई अझै पर्खिरहेका छन्। किनकि, हामीलाई थाहा छ कि यो एक धेरै विस्तृत संसार हो जुन अझैसम्म पत्ता लाग्न सकेन। त्यसकारण, यदि तपाइँ तपाइँको घरबाट र यो मात्र एक क्लिकको साथ आराम गर्न जारी गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंसँग जादुई पृष्ठहरू फेला पार्ने विकल्प छ जस्तै डायभर्सुअल जुन तपाइँलाई मद्दत गर्दछ। तपाईंलाई अझ राम्ररी चिन्नुहोस्, अलिक बढी रमाईलो गर्नुहोस् र तपाईंको यौन जीवनमा भावनाको त्यो छुनुहोस्। तपाईंले नयाँ अभ्यासहरू, उत्तम सुझावहरू र उत्तेजनाहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ जुन तपाईंले प्रेम गर्नुहुनेछ!
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » स्वास्थ्य » सम्बन्ध » Keys कुञ्जीहरू तपाईंको कामुकता सुधार गर्न र सुखी हुन
About 35 योगको बारेमा प्रेरक उद्धरण
कसरी एक आकर्षक PowerPoint बनाउने